संविधान दिवस नेपाली जनताको राष्ट्रिय उत्सव हो : प्रधानमन्त्री - हिमाल दैनिक
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १७:२५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका आफनै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मूल कानून–संविधान जारी गरी भएको ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सबैप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
पाँचौँ संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा आज आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्षदेखि संविधान दिवसलाई सरकारी वा राजकीय दिवस जस्तो होइन, आम नेपाली जनताको उत्सवको रूपमा धुमधामसाथ मनाउन थालिएको बताएका छन्।
नेपालले डेढ वर्षको अवधिमा नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थापन सहजरूपमा गरेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजश्व बाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस समारोहमा दिइएको मन्तव्यको पूर्णपाठ यस प्रकार छ:
त्यस्तो दिवस, जसले नेपाली जनसङ्ख्याको सयौँ थुङ्गा फुलहरुलाई एउटै मालामा उनी विविधतामा रहेको एकताको सन्देश प्रवाह गरेको थियो,
त्यस्तो दिवस, जुन दिन आम नेपालीहरु दशकौँको सङ्घर्षको प्रतिफल लिपिबद्ध गर्न सफल भएको खुशीयालीमा उत्सव मनाइरहेका थिए र, यसपछि लगातार शुरु हुने चाडपर्वको प्रतीक्षामा थिए ।
दशकौँसम्म सङ्घर्षमा हेलिएकाहरु जसले पीडा झेलेका छन् बुझेका छन्, तिनका लागि आजको दिन गौरवगाथाले भरिएको दिवस हो । पारिवारिक बिछोड, उत्पीडन र छटपटीबाट उन्मुक्ति पाएका सबै नेपालीका लागि आजको दिन, स्वतन्त्रता दिवस पनि हो–प्राप्त उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने उत्सव हो । त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा अरुचि हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो हो ।
त्यस्तो निष्ठा, जहाँ वंशानुगत÷जन्मजात श्रेष्ठता जस्तो अलोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कुनै स्थान हुन्न । त्यस्तो गतिशीलता, जहाँ प्राप्त अधिकारलाई व्यवहारमा प्रयोग गरिन्छ । संविधानको कुन भाग, धारा वा दफामा के–कति अधिकार रह्यो वा रहेन जस्ता विषयमा अल्झिने भन्दा जुन बेला जे मिल्दैन, जुन अग्रगतिका अघि तगारो बन्छ, त्यसलाई त्यहीबेला विधिसम्मत ढङ्गले मिलाउँदै÷पन्छाउँदै अघि बढिन्छ ।
त्यतिखेर मैले संविधानले आत्मसात गरेका हाम्रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र लक्ष्यबारे चर्चा गरेको थिएँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, पछि परेको नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न तपाई/ हामीले संयुक्तरूपमा देखेको, पूरा हुने र पूरा गर्नै पर्ने सपना भएको उल्लेख गरेको थिएँ ।
आज म ती प्रतिबद्धतालाई पुनः एकपटक दोहो-याउने अनुमति चाहन्छु । र सरकार सञ्चालनको १८ महीनामा भएका उपलब्धिको सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो वृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च वृद्धि हो ।
भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकाबन्दीको वर्षबाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राजश्व सङ्कलनमा २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा बैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ ।
जस्तो कि कृषि कर्जामा: ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा:२०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जामा: २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा: ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट शुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६२२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजश्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
टेलिप्रिजेन्सको माध्यमवाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण कार्यप्रारम्भ भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सेवामार्फत सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन, भूमि व्यवस्था, यातायात प्रशासन, औद्योगिक सेवा, राजश्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, अध्यागमन तथा राहदानी, एकीकृत नागरिक एप्स र विद्युतीय मतदानको प्रणाली सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ ।
मुलुकका ८९ मालपोत कार्यालयबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कार्य थालनी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करीब एक हजार ६०० किमी कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । २४३ सडक पूलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा मुलुकका ७ हजार ३ सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को एकै वर्षमा मात्र ४ हजार १ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपण भएकोछ । योवृक्षारोपण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशत वढी हो । वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख विरुवा रोपिएका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएका ४ लाख ९२ हजार निजी घर, ५ हजार विद्यालय र ६ सय ६५ वटा स्वास्थ्य चैकीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । वारा र पर्साका चक्रबातीय आँधी पीडितहरुका लागि ८ सय ६९ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताकोलागि पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाईप्रति महीना ५ हजाररुपैंयाँ पु-याउने प्रतिबद्धताअनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेका थियौं। कानूनहरु बने, जनशक्ति विन्यास भए । स्रोतको न्यायोचित वितरण भयो । तीनवटै तहमा सरकार सञ्चालनकालागि आवस्यक न्यूनतम भौतिक संरचना निर्माण भए । विकासकालागि आधार बनेको छ– कतै जग हालिएको छ, कतै पहिलो वा दोस्रो तल्ला थपिएको छ । विकासका लागि आवश्यक अरु तल्लाहरु थपिनेछन्, थप्दै÷थप्दै अघि बढिने छ ।
भन्नकै लागि त भन्न सकिन्छ नि– खै त रेल, खै त पानी जहाज ? कहाँ छ सुरुङ् खनेको ? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको ? अझैँ जोड दिएर सोध्न सकिन्छ– हामीलाई सपना किन देखाएको ? हामीमा आशा किन जगाएको ?
म बिनम्रताका साथ स्वीकार्छु– हो, मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ । मैले भनेको हुँ– निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौँ ।
पाइला नै नचलाई कसरी दौडने ? यथास्थितिमा रहेर परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिने ? रुपान्तरण हैन प्रतिक्रिया, परिणामसँग साइनो नै नहुने प्रक्रियामा किन र कति अल्झिरहने ? विना–मुद्दाका विषयमा मूल मुद्दाजस्तो बहस÷विवादको माहौल किन बनाउने ? अझै पनि ‘हुँदैन÷सकियो’ जस्ता असन्तुष्टिको खेतीलाई उकेराकिन लगाउने ? अब हामीले तरिका फेर्नैपर्छ ।
काठमाडौँ–तराइ÷मधेश द्रूतमार्गको निर्माण सरकारको यही कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
Prevपछिल्लोपूर्वसांसद दाहालको निधन
अघिल्लोमुलुकभरका ३२ विमानस्थलमध्ये १३ मात्रै नाफामाNext